Tsikera Momba Ireo ‘Miaramila Tsimatimanota’ ao Kashmir Tantanin’ny Indiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2016 10:27 GMT
Tafika Indiana am-perinasa tao Jammu sy Kashmir. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'i Kris Liao. CC BY-NC-ND 2.0
Niteraka fibedesana henjana avy ao Azia Atsimo sy avy any ivelany ny herisetra sy korontana vao haingana tao Kashmir tantanin'ny Indiana. Nosoritan'ilay manampahaizana Amerikana malaza Noam Chomsky fa “manafintohina” ny zavamisy ary nampitovy an'i Kashmir sy ny tolon’ ny vahoaka Palestiniana izy. Marobe ireo hetsi-panoherana tao amin'ny oniversite sy ny toeram-bahoaka, izay nampifoha ny olona tamin'ny torimasony manoloana ireo vaovao fandatsahan-drà. Nilaza ireo mpandinika marobe fa iray amin'ireo antony lehibe indrindra amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao amin'ny faritra ny Lalànan'ny Fiarovam-bahoaka 1978 sy ny Lalàna momba ny Fahefana Manokana ho an'ny Tafika , izay manome tsy fisaziana ho an'ny miaramila ao Kashmir sy ny faritra an'ady hafa ao avaratra atsinanan'i India.
Olona roa ambin'ny folo tapitrisa no monina ao ao Kashmir amin'ny ampahan'ny Indiana, izay ara-jeografika, nozaraina teo amin'i India sy Pakistan ary notakian'ny roa tonta izy manontolo. Maro amin'ireo mpanao politika mpisintaka, mpikomy, ary olon-tsotra no mitsipaka ny fiandrianan'i India ao Kashmir sy nitolona ho an'ny fahaleovantena na fitambarana amin'i Pakistan, miaraka amin'ny feon'ny mpikatroka nanomboka tamin'ny 1989. Taorian'ny fanombohan'ny fikomiana mitam-piadiana, niaina fanjakazakan'ny miaramila haingana i Kahsmir. Ankehitriny, izy no faritra anjakazakan'ny miaramila betsaka indrindra eto amin'izao tontolo izao, izay ahitana miaramila dimy hetsy mahery.
Nilaza ilay mpanoratra Indiana Arundhati fa mandà ny fahafahan'ny vahoaka Kashmiri – azadi ny fireneny.
Raha miampanga – tsy maintsy miampanga- ny fitifirana ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana tsy mitondra fitaovam-piadiana, ny fanafihana ataon'ny polisy amin'ny fiara mpamonjy voina sy ny hopitaly, sy ny fanajambàna tanora amin'ny basy poleta izahay, dia tsy maintsy raketintsika ao an-tsaina fa tsy momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ataon'ny mpitandro ny filaminana Indiana ao amin'ny lohasaha Kashmir ihany no tena adihevitra. Na dia henjana aza izany, ireo fanitsakitsahana ireo no voka-dratsy – voka-dratsy tsy azo ialàna sy tsy azo sorohana- amin'ny famoretan'ny miaramila ny tolon'ny vahoaka mitady fahafahana. Tsy mitolona ho amin'ny fametrahana fanjakana tan-dalàna na fiafaran'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny mponina Kashmiri. Mitolona ho an'i azadi. izy ireo. Noho izany, mivonona hiatrika bala amin'ny vato [tora-bato] izy ireo. Noho izany, mivonona ho faty marobe izy ireo.
Tamin'ny taratasy ho an'ny manampahefan'ny Firenena Mikambana manaramaso ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, nilaza ny Firaisan'ny Fiarahamonim-pirenena Jammu sy Kashmir fa:
Noho ny fisian'ireo tafika mitam-piadiana tombanana ho 700.000, Jammu sy Kashmir no faritra feno miaramila betsaka indrindra manerantany ankehitriny ary miatrika fanafihana miely patrana sy mitohy eo am-pelatanan'ny tafi-panjakana Indiana nandritra ny 26 taona farany ireo olom-pireneny.
Bilaogera Kashmiri Aaqib ao amin'ny Amoz-i-Bulbul nanamarika hoe:
Noho ny fampiharana ny lalàna fanomezam-pahefana manokana ho an'ny tafika (AFSPA), narefo sy natosika tany amin'ny zorony miaraka amin'ny sata “mpijery tsy rototra” ny fitantanam-panjakana.
Taorian'ny nahafatesan'i Burhan Muzaffar Wani, komandàn'ny vondrona mpisintaka Kashmiri Hizbul Mujahideen, notsipahan'ny Fitsarana Tampony ilay tsy azo ihodivirana “fahefana manokana” ho an'ny miaramila sy ny polisy, izay raisin'ny maro fa manampy amin'ny fanitsakitsahana mampihoro-koditra ny zon'olombelona. Manavaka an'i Kahsmir ny lalànan'ny Fiarovam-bahoaka (PSA), izay mamela ny fampidirana am-ponja mandritra ny roa taona tsy misy fitsarana (ankoatra ireo fepetra hafa manafintohina). Manana fepetra mivelatra kokoa amin'ny fitantanana ny faritra rotidrotiky ny ady ny Lalàna manome Fahefana Manokana ho an'ny Tafika (AFSPA). Noravain'ny fanjakan'i Tripura ny AFSPA tamin'ny volana Mey 2015, ka nahitàna fihenàn'ny asa fampihorohoroana. Noho ny fampitambarana ny AFSPA, PSA sy ny lafiny ara-pitsarana hafa, olona ao an-toerana maherin'ny 94.290 (anisan'izany ireo gadra 7.038 sy “nanjavona” 8000 ) no namoy ny ainy tao Kashmir tantanin'ny Indiana hatramin'ny 1989, araka ny filazan'ny Sampam-pikarohana ao amin'ny Sampan'ny Media Kashmir.
Thma U. Rangli Juki ( “Tur”) nanoratra tao amin'ny Riot.in, tranonkalangazetiboky avy ao Meghalaya:
Sokajiana tanteraka toy ny fepetra ara-dalàna tsy manam-paharoa amin'ny tsy firaharahiany mihitsy ny zon'ny mponina noho ny fampiharana tsy ara-dalàna ny fahefana mihoapampana ny AFSPA. Mahatonga ny olona ho mora hiharan'ny fampiasan-kery tafahoatra avy amin'ny mpitandro ny filaminana ny lalàna satria manome azy ireo fahefana sy alalana feno hampiasa hery.
Nilaza ihany koa i Tur fa manampahefana iraisampirenena marobe no nandroso soso-kevitra fa tokony hanafoana na fara faharatsiny hanova ny AFSPA mba hampifanaraka azy kokoa amin'ny lalàna iraisampirenena momba ny zon'olombelona ny governemanta Indiana.
Tato anatin'ny herinandro vitsy, ankoatra ireo toeran-kafa, nisy ny hetsi-panoherana tao Delhi sy Calcutta, nitaky ny fanafoanana ny AFSPA sy PSA, sy fanesorana ao amin'ny faritra tsy misy hatak'andro ireo miaramila ny mpanao fihetsiketsehana. Nilaza ireo mpanao fihetsiketsehana fa manamora ny fanjavonana sy ny famonoana faobe tsy ara-dalàna izay namely ny faritra ny AFSPA sy PSA .